एक Ceiling तेर्सो कसरी स्थापना गर्न
छत तेर्सो - एक लगभग सबैको पहुँच छ, खेल को लागि उपकरण हो। यो सिम्युलेटर एक विशेषता स्टोरमा खरिद वा आफ्नो बनाउन सकिन्छ। उपकरण घरमा आकारमा शरीर राख्न दैनिक अभ्यास गर्न अनुमति दिन्छ।
घर लागि तेर्सो बारहरू को विविधता
क्षणमा, त्यहाँ तेर्सो बारहरू छानो धेरै प्रजातिहरू छन्। एक विस्तृत श्रृंखला संग, सबैलाई एक आदर्श प्रशिक्षक आफूलाई लागि चयन गर्न सक्नुहुन्छ। तेर्सो हुन सक्छ:
पर्खाल। यो डिजाइन पर्खाल मा एङ्कर बोल्ट संग निश्चित छ। जब मात्र होइन लोड-असर क्षमता, तर पनि हात को लम्बाइ र पर्खाल बाट crossbar गर्न दूरी ध्यान यस्तो सिम्युलेटर छनौट।
Spacer। यो तेर्सो ढिक्का doorways स्थापित। यो सिम्युलेटर को स्थापना धेरै कठिनाई कारण छैन। तथापि, मा संरचना को समाप्तिन्यू पछि को doorposts प्वालहरू छन्।
पर्खालहरु बीच एक spacer। संकीर्ण aisles मा यस प्रकारका सिम्युलेटर फिट। बोल्ट प्रयोग गर्दै एङ्कर समाधान गर्न।
Hinged। मा Fastened सिम्युलेटर पर्खाल बारहरू वा अन्य खेल उपकरण।
को कमजोर पर्खाल भने
गृह कमजोर पर्खाल हो भने, यो एक छत तेर्सो स्थापना गर्न सम्भव छ। ठोस वा प्लास्टर पर्खालहरु तीव्र प्रशिक्षण समयमा भारी भार सामना गर्न सक्षम छन्। फलस्वरूप, यस्तो पर्खाल बस फुट्छ सकेन। छत तेर्सो मात्र निलम्बित छत वा संरचना plasterboard बनेको छ गर्नेहरूका लागि उपयुक्त छैन।
के तपाईं स्थापनाका लागि आवश्यक
घर को लागि छत तेर्सो बारहरू - यो पातलो पर्खालहरु गर्नेहरूलाई लागि एक आदर्श समाधान छ। डिजाइन स्थापना गर्न यो के हुनेछ? उपकरण र हार्डवेयर को सूची:
उपयुक्त व्यास संग Bur।
10 12 मिमी को एक व्यास संग एङ्कर बोल्ट।
नट र रेन्च।
आवश्यक छ भने, स्वतन्त्र डिजाइन सेट गर्न सकिन्छ। यो प्रक्रिया केही सीप र शुद्धता आवश्यक मनमा राख्नुहोस्। स्थापना पर्खाल र छत लागि तेर्सो ठीक गर्न आवश्यक छ।
पहिलो चरण स्थापना डिजाइन को स्थान निर्धारण गर्न छ। यो अध्ययन गर्न सजिलो हुनुपर्छ। यो आवश्यक छैन यो भित्री नजिकै तेर्सो ठाँउ हो। समयमा गहन सत्र कुरा तोड्न सक्नुहुन्छ।
त्यहीँ सिम्युलेटर तल्ला देखि मीटर अधिक 2.2 भन्दा एक उचाइ हुनुपर्छ। छत संरचना को सतह देखि 35 40 सेन्टिमिटर को एक दूरी मा स्थित हुन अनिवार्य छ। को crossbar को लम्बाइ साढे एक मीटर हुनेछ।
को पंच प्रयोग प्वालहरू बनाउन गर्न छत मा सुरु गर्न। यसलाई त्यहाँ ठोस तल्ला मा voids र reinforcements छन् कि टिप्पण लायक छ। राम्रो तिनीहरूले गिर छैन। यदि यो हुन्छ, यो एक नयाँ प्वाल ड्रिल गर्न आवश्यक छ।
सिम्युलेटर फिक्सिंग लागि बांधनेवाला एंकरिंग4आवश्यक छ। यी फास्टनरों पत्थर, ईटा र ठोस को सतह मा संरचना स्थापना को लागि डिजाइन छ। एङ्कर बोल्ट एकदम भारी भार सामना गर्न सक्छन्।
रासायनिक एन्कर्स को प्रयोग
यो एक तेर्सो हुनुपर्छ छत समाधान गर्न हार्डवेयर र स्क्रू प्रयोग गर्न रहनेछ। इच्छित भने, सिम्युलेटर रासायनिक एन्कर्स सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ। यो गर्न, प्वाल विशेष मिश्रित भरिएको हुनुपर्छ दुई-तिहाई पूरा गर्नुहोस्। यस मामला मा यो एक बहुलक राल वा प्रयोग गर्न आवश्यक छ epoxy टास्ने। एक दिन पछि, संरचना कठोर गर्दा, यो सम्भव पागल संग एक छत तेर्सो समाधान गर्न छ।
यांत्रिक एन्कर्सका को प्रयोग
संरचना यांत्रिक एंकरिंग हार्डवेयर प्रयोग माउन्ट गरिएको छ भने, त्यसपछि एक विशेष टास्ने आवश्यक छैन प्रयोग गर्नुहोस्। यस्तो पूर्ण रासायनिक भन्दा फरक मा बोल्ट फिक्सिंग को सिद्धान्त। विश्वसनीय fixation को बाहुला को खन्नु भित्र बांधनेवाला wedging द्वारा हासिल छ।
माउन्ट संरचना लागि प्वालहरू व्यास ड्रिल गर्न आवश्यक हुनुपर्छ, र त्यसपछि तिनीहरूलाई सफा। छत मा माउन्ट छ कि भाग मार्फत, यो एङ्कर बोल्ट धक्का आवश्यक छ। Metiz यसको अन्त तेर्सो पट्टी को indurated भाग abuts मा नट स्थित छ रूपमा लामो स्कोर गर्न आवश्यक छ। यस मामला मा सावधान हुन आवश्यक छ। ठोस वा ईटा, rasklinitsya मार लङ्गर को दोस्रो अन्त्य। यो सिम्युलेटर संग सुरक्षित स्थान मा लक गर्दछ। यस तरिका तय गर्न सकिन्छ तेर्सो छत प्रबलित।
यो संसारमा सबैभन्दा छिटो बाइक विकास
Kisten - यो के हो? लचिलो-jointed edged हतियार: विवरण, प्रयोग
दोहोरिने क्रसबो "बिच्छू": तुलनात्मक विशेषताहरु
स्मिथ सिम्युलेटर ईश्वर शरीर सुन्दर बनाउन हुनेछ
एयर राइफल Hatsan 125. समीक्षा, फोटो, मूल्यहरु र विनिर्देशों
Pasynkovanie मरिच: खर्च वा गर्न
Antidepressant तरकारी फारस। प्रयोगको लागि निर्देशन
थकान, जलन र सूक्खापना देखि आँखा को लागि खस्छ
एक spar के छ र के कार्यहरु यो कार्य?
ईवा Mendes: Filmography र अभिनेत्री जीवन
सेल्टिक KNOTS: मान, जाल योजना